whittling နှင့်ထွင်းထုအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ? - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / whittling နှင့်ထွင်းထုအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ?
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-04-19 မူလ:ဆိုက်ကို
ထွင်းထုသည်အဖြူအလိုရှိသောပုံသဏ္ into ာန်ထဲသို့0င်စေခြင်း,မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဓားများ,အဖြူing နှင့်ထွင်းထုနှစ်ခုနှစ် ဦး စလုံးနည်းတက္ကသိုလ်ထွင်းထုအတွက် ed ။အစပြုသူများအတွက် Woodworking ကိရိယာများထို့အပြင်ပါဝင်သည် minipOrtable ကြိတ်စက်,nailmabine, polishing tool ကို,စသည်တို့
1SသိတီAပေလေပြိုင်၏Citting သို့မဟုတ်Cဂုဏ်ပြုIsRအဆိုပါမှ atedCဂုဏ်ပြုPခေြာက်ကေ
ထွင်းထုထားသည့်ပထမခြေလှမ်းမှာ chisel Roughelel ကိုအလွတ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်း၏မော်ဒယ်လ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုဂျီသြမေတြီနှင့်အစပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ပြီးအစပိုင်းတွင်အလုပ်၏အပြင်ဘက်နှင့်အတွင်းပိုင်းပုံများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကွက်လပ်ကိုကွက်လပ်များအနေဖြင့်ကွက်လပ်မှအောက်သို့၎င်း, ၎င်းသည်သစ်သားမျက်နှာပြင်မှစတင်ပြီးအလွှာအားဖြင့်အတွင်းအလွှာကိုတွန်းအားပေးသည်။ အဆိုပါ whittlingနည်းလမ်းကိုအဓိကအားဖြင့်လိုအပ်သည့်ကွက်လပ်များနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်မားစွာဖြင့် chiselling blank တွင်အသုံးပြုသည်။
ထို့နောက်ဓါးကျွမ်းကျင်မှုများသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုသင့်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ထွင်းထုသည့်နည်းစနစ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်လက်ပတ်သွေးနှင့်ပါးလွှာသောဓားဖြင့်ဓားဖြင့်ဓားဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းကိုဓားဖြင့်ဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းကိုဖြည့်စွက်ပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပတ်0န်းကျင်ကိုပြသနိုင်ရန်ဓားခြေရာခံသည်သို့မဟုတ်လှည့်ပတ်နေသင့်သည်။
ဘယ်လိုသစ်သားကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်တည်ငြိမ်မှုအကွာအဝေးအတွင်း၌မည်သို့နည်းဖြင့်မည်သို့နည်း။ whittl ၏မှန်ကန်သောလမ်းingWood Grain နှင့် Whittl ၏ညှနျကွား၏ညွှန်ကြားချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်ingWood Grain သည်အလျားလိုက်သို့မဟုတ် Oblique ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါ cutter နှင့်သစ်သားသေးငယ်တဲ့ထောင့်မှာမဟုတ်ဘဲထောင့်သေးငယ်တဲ့ထောင့်မှာဖြစ်သင့်သည်။
ထွင်းထုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ထွင်းထုထားသောဓားသည်သစ်သားစပါးနှင့်အတူထောင့်အနည်းငယ်ရှိသင့်သည်။ ထောင့်သေးငယ်သည်, ၎င်းသည်အားထုတ်မှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သစ်သားကိုပါးလွှာသောပါးလွှာသည်, ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းရည်နိမ့်ကျလိမ့်မည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, ဖြတ်တောက်သောထောင့်ပိုကြီးလေလေအင်အားပိုမိုလိုအပ်လေ, သို့သော်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်အလွန်မြင့်မားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကြမ်းတမ်းသောကွက်လပ်ကိုရိုက်နှက်ရန် Mallet လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကြမ်းတမ်းပြီးကြမ်းတမ်းစွာရိုက်နှက်သည့်အဆင့်တွင်လျင်မြန်စွာဖြတ်နိုင်သည်အဖြူingအမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဓား၏ထောင့်အပြင်သစ်သား၏ထောင့်များအပြင်သစ်သား၏ထောင့်များကိုလည်းရှာဖွေသင့်သည်အဖြူingဒါကြောင့်ဖြတ်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်း။
အခြေခံအားဖြင့်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည့်ထွင်းထားသောဓားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ခုမှာ TheSweng tubular shapelfblank ဓါးဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ခုမှာ Formdrill of Ship'polishing ဓါးဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောကွက်လပ်များနှင့် polishing အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
(2) အရန်Tအဘို့အ OolsWoodCဂုဏ်ပြု
အရန်သစ်သားထွင်းထုကိရိယာများသည်အဓိကအားဖြင့်သံတူများ, သစ်သားဖိုင်များ, ပုဆိန်များနှင့်လွှများကိုရည်ညွှန်းသည်။
ပုဆိန်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လွှ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသစ်သားထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ cooporated သောအရေအတွက်ကိုဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်မြင်ရန်ဖြစ်သည်ကြမ်းတမ်းသောကွက်လပ်။ ဖြတ်တောက်သောအခါအလွန်အကျွံအင်အားသုံးမသုံးရန်သတိထားပါ။ တည့်တည့်တက်နှင့်ဆင်းဖြတ်မထားပါနဲ့။ ပုဆိန်ဓါးနှင့်ဒေါင်လိုက်စပါးကို 45 ဒီဂရီခန့်တွင်ထိန်းသိမ်းထားသင့်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သစ်သားအက်ကွဲလိမ့်မယ်။
သစ်သားဖိုင်သည်အဓိကအားဖြင့်ထွင်းထုထားသောအလွတ်အချပ်အလွတ်တွင်အသုံးပြုသည်။ Polishing အတွက်ဓါးအမှတ်အသားနှင့်စတင်သည့်စောင်မာ့ခ်ကိုချောချောမွေ့မွေ့စေရန်ပြားချပ်ချပ်ဓားဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။ ကုသမှုကိုဖယ်ရှားရန်ပတ်ပတ်လည်ဓားသို့မဟုတ် Oblique ဓားများကိုလည်းအစားထိုးနိုင်သည်။ ဖိုင်သည်မော်ဒယ်ရေးပုံကိုကြီးမားသော area ရိယာတစ်ခုတွင်အလျင်အမြန်ညှိနိုင်သည်။
သစ်သားသံတူ၏ပုံစံများပြားချပ်ချပ်များ,ပင်ကျယ်ပြန့်နှင့်စတုရန်း။ သံတူမျက်နှာပြင်၏အတိုင်းအတာကို7× 5.5 × 2.5 စင်တီမီတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။က t ကိုလျှင်oo ကျဉ်းမြောင်းသို့မဟုတ်လွန်းထူကHammer သက်ရောက်မှုအမှတ်၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် uniformity ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
သစ်သားထင်းသောသစ်သားထွင်းထုခြင်းများတွင်လည်းသစ်သားသေးသေးလေးများပါ0င်သည်လျှပ်စစ်အရောင်တင်သူနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စတိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း။ ၏ရည်ရွယ်ချက်သေးငယ်တဲ့ polishing စက်သာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာပြင်ကုသမှုအတွက် အချောလုပ်အကျင့်ကိုကျင့်၏.လက်ကျင်းပ policerဖြစ်နိုင်ပါတယ်စာချုပ်ကြီးမားသော area ရိယာ polishing အဘို့အ ed အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်လုပ်သားချွေတာခြင်းတို့တည်းသောလက်အလုပ်အစား, သို့သော်၎င်းသည်သာဖြစ်သည်အရှက်ကြီးမားသောနှင့်အလတ်စားအရွယ်အစားပြားချပ်ချပ် volume နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ အပေြာင်းလျှပ်စစ်အသေးစားလေ့ကျင့်ခန်းအဓိကအားဖြင့်ဆွန်းနှင့်လက်ဖြင့်တွင်းတူး။ ဘယ်အချိန်မှာကြီးမားသောစကေးပန်းပုလုပ်နေကြသည်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်စာချုပ်ed မှ edအစက်နှင့်အကြမ်းဖျင်းဖြတ်။
Woodworking ကိရိယာများ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသစ်သားကိရိယာများ အစပြုသူများအတွက် Woodworking ကိရိယာများ အသေးစားအိတ်ဆောင်ကြိတ်စက် အသေးစားလက်သည်းစက် Mini polishing tool ကို Mini Electric Pollerer သေးငယ်တဲ့ polishing စက် လက်ကျင်းပ policer လျှပ်စစ်အသေးစားလေ့ကျင့်ခန်း